Claudine Razaimamonjy (A&C) : Nenjehin’ny Bianco amin’ny resaka fandraharahana -
AccueilRaharaham-pirenenaClaudine Razaimamonjy (A&C) : Nenjehin’ny Bianco amin’ny resaka fandraharahana
05/04/2017 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Mazava ny resaka. Nifamahofaho be ihany mantsy ny resaka fisamboran’ny Bianco an’i Claudine Razaimamonjy, tompon’ny Hotel A&C eny Ivato, ny alatsinainy 3 Avrily lasa teo, tetsy amin’ny Lapan’ny Fanatanjahantena Mahamasina.
Nitondra fanazavana mahakasika izay indrindra anefa ny Bianco omaly, teny amin’ny birao fiasany eny Ambohibao. Araka izany, nambaran’ny talem-paritry ny Bianco, Rakotoson Benjamina Arthur fa tsy misy resaka andramena velively ny antony hanononana an’i Claudine Razaimamonjy fa resaka fandraharahana amin’ny asam-panjakana amin’ny maha mpandraharaha ny tenany.
Nambaran’ny teo anivon’ny Bianco ihany koa fa efa am-bolana maromaro no nanombohan’ny fanadihadiana mikasika ny raharaha nanononana an’ity tompon’ny Hotel A&C Ivato ity. In-telo nampanantsoina izy tamin’izany ary tsy nipoitra mihitsy ka niafara tamin’iny fisamborana azy ny alatsinainy 3 Avrily lasa teo iny. Araka izany, mbola mandeha ny famotorana an-dRamatoa Claudine Razaimamonjy eny amin’ny Bianco.
Voalaza ihany koa fa maromaro ireo raharaha hihainoana sy hanaovana famotorana an’i Claudine Razaimamonjy izay efa nanomboka ny taona 2013, 2014, 2015 ary 2016. Hatreto, voalaza hatrany fa ireo raharaha ireo no hanaovana fanadihadiana azy. Notsindrian’ny Bianco fa mitentina am-polony miliara ireo raharaha hihainoana ity tompon’ny Hotel A&C ity. “Tsy eto Antananarivo ihany io raharaha io fa hatrany Fianarantsoa. Misy ihany koa any amin’ny faritany hafa fa izahay eto Antananarivo no mandray an-tanana ny famotorana sy ny fanadihadiana”, hoy ny talem-paritry ny Bianco, Rakotoson Benjamina Arthur.
Ankoatra izay, mangataka fifanomezan-tanana hatrany ny Bianco amin’ny fanatanterahana ny asa hiandraiketan’izy ireo. Nambara teny am-pamaranana fa tsy misy teritery avy amin’ny Fitondram-panjakana kosa ny fisamborana sy fanatanterahana ny asa.